Ngwaọrụ kachasị mma inye na ụbọchị Valentine | Akụkọ akụrụngwa
Ngwaọrụ kachasị mma inye na ụbọchị Valentine
Ignacio Sala | | Ngwa, Ngwa
Na ụbọchị abụọ inepo Day ga-eme ememe, a ụbọchị na ọtụtụ di na nwunye nwere kaa na kalenda na-acha ọbara ọbara. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ fọdụrụ naanị ụbọchị abụọ rue taa, ekele maka ọrụ nke Amazon na-enye anyị, anyị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ma nata ya echi ka Wenezde na-esote anyị nwee ya.
Amazon, dị ka ọ dị na mbụ, achọghị ịhapụ ememe a na na-etinye n'aka anyị ngalaba nke anyi puru ichota otutu ederede, maka ya na ya na ya na onu ahia, nuzo a karie aka karie ihe ichoro.
Mana ka, ọ bụrụ na anyị enweghị oge Iji hụ onyinye niile nke Amazon na-enye anyị, n'okpuru anyị na-egosi gị ihe ndị kachasị enye, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
1 Harman Kardon Onyx Studio 3 Ọkà okwu
3 Xiaomi Mi Action Igwefoto 4k
4 Optoma HD27 projector
5 HP Sprocket Photo Printer
6 JBL Isi-ekwe ikuku Ikuku
7 Smart Tag Motorola Jikọọ Mkpụrụ ego
8 235 nke na-elekọta Garmin
Harman Kardon Onyx Studio 3 Ọkà okwu
Harman Kardon na-enye anyị ụdị Studio 3, ihe nlele nke na-enye anyị ike nke 60w, na-etinye igwe okwu na teknụzụ ịkagbu mkpọtụ iji nwee ike ịkpọ oku na-enweghị aka, batrị ya ruru awa ise nke playback. Ihe nlereanya na uhie bu dị maka naanị euro 125, ịbụ ọnụahịa ya na euro 269.
Zuta Harman Kardon Onyx Studio 3
Xiaomi Mi MIX 2 bụ ezigbo ọdụ na Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Ihuenyo ahụ, nke na-enweghị oke ala, bụ 5,99 sentimita asatọ na mkpebi Full HD na usoro 18: 9. Ahụ ya bụ seramiiki na mbara igwe nke aerospace aluminum na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị n'azụ. Ọnụ ya bụ euro 499, ọnụahịa pụrụ iche maka uru ọ na-enye anyị.
Xiaomi Mi Action Igwefoto 4k
Igwefoto egwuregwu Xiaomi na-enye anyị ngwaọrụ nwere ike ịdekọ vidiyo na 4k àgwà na 30fps, na a 145 ogo obosara oghere oghere, 6-axis electronic stabilizer, 2,4-inch touchscreen na oghere elekere 7 nke Sony mepụtara. Ọnụ ya: 132,90 euro.
Zụta Xiaomi Mi Action Camera 4K
Optoma na-enye anyị ihe ngosi HD27, ihe ngosi 3.200 nke lumens na-enye anyị ohere ike ntule ihuenyo nke sitere na 28 sentimita asatọ na 300 na usoro 16: 9. Ọnụ ego ya bụ euro 749, mana maka ụbọchị ịhụnanya, anyị nwere ike zụta ya naanị euro 645.
Ihe odide HP Sprocket Ọ bụ nha ekwentị nwere ihe dị ka gram 170, nke na-enye anyị ohere iburu ha mgbe niile. N'ime, anyị nwere ike ịchekwa ihe ruru akwụkwọ 10 na nha 5 x 7,6 cm. Mpempe akwụkwọ ndị a na-adọrọ adọrọ ka anyị wee nwee ike ịrapara ha ebe ọ bụla, ọ bụrụ ọba foto, akwụkwọ, akpa azụ ... Ọnụahịa nke ngwa nbipute a bụ 148,99 euro.
Zụrụ HP Sprocket
JBL Isi-ekwe ikuku Ikuku
JBL's E45BT sitere na supraaural ụdị, wireless na foldable. Ha nwekwara eriri anyị nwere ike ijikọ ma ọ bụrụ na batrị agwụ. Nke a USB nwere ihe integrated ime na igwe okwu. Ọnụahịa nke JBL E45BT bụ euro 99,99.
Zụta JBL E45BT
Smart Tag Motorola Jikọọ Mkpụrụ ego
Motorola na-enye anyị bọtịnụ anyị nwere ike kpọgidere na igodo iji chọta ha ngwa ngwa mgbe anyị na-amaghị ebe anyị hapụrụ ha, bọtịnụ na-enyekwa anyị ohere iji ya bọtịnụ na igwefoto nke ama anyị were selfies na-enweghị ijide smartphone juggling. Ahịa: 19,99 euro.
Zụta Motorola Jikọọ Mkpụrụ ego
235 nke na-elekọta Garmin
Garmin Forerunner 253 na-bụ GPS na-agba ọsọ na-elekwa nke na-atụle obi anyị na ezigbo oge Na mgbakwunye, ọ na-eziga amamọkwa nke ama anyị natara site na ama, nke mere na anyị enweghị ike iji ya na-egwu egwuregwu. Ọ bụ waterproof (5 ATM) na ya obi ọnụego erite bụ ihe kasị ezi na anyị nwere ike ịhụ na ahịa. Ọnụ ego ya bụ euro 349, mana obere oge anyị nwere ike inweta ya naanị euro 207.
Zụrụ Garmin Forerunner 235
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ngwaọrụ kachasị mma inye na ụbọchị Valentine
Ọhụrụ Alaeze Obi 3 ụgbọala na-adọkpụ na-egosi anyị ụmụ nwoke nke Monsters SA